Ihe omuma nke ndi mmadu 5 nke ulo ahia | Martech Zone
Ihe omuma nke 5 Social Media nke ndi ahia
N'oge na-adịbeghị anya, a gbara m ajụjụ ọnụ wee jụọ m ihe ụlọ ọrụ na-ezighị ezi na-eme mgbe ha na-emepe ma na-etinyekwa usoro mgbasa ozi ha. Ahụmịhe m nwere ike imegide ọtụtụ ndị isi ebe ahụ, mana - n'eziokwu niile - echere m na ụlọ ọrụ a mechara tozuo ma nsonaazụ ya na-ekwu maka onwe ha.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-ezighị ezi # 1: Social Media bụ Channel Channel
Ndị ụlọ ọrụ na-elekarị anya na mgbasa ozi mmekọrịta dịka a ahia ọwa. Social media bụ a nkwukọrịta ọwa enwere ike iji ya zụọ ahịa - mana ọ bụghị naanị ọwa ahịa. Ihe mbụ ụlọ ọrụ na-abanye n'ime mgbe ị na-abanye na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ mkpesa - ma ugbu a, ha kwesịrị idozi ya nke ọma ebe ọ bụ na ụwa na-ele ya. Mgbasa mgbasa ozi bụ ihe ndị na-ege ntị na-atụ anya n'agbanyeghị ụlọ ọrụ gị na-ele ụzọ ọwa ahụ kwesịrị ga-eji. Beingghara ịza arịrịọ ndị a ga-ebibi usoro mgbasa ozi ọhaneze nke ị zubere.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-ezighị ezi # 2: Laghachi na ntinye ego kwesịrị ka ọ dị ngwa ma wepụta ya ngwa ngwa
Ndị ụlọ ọrụ chọrọ ịlele arụmọrụ ahụ na ịlaghachi na itinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta na ọ bụla tweet ma ọ bụ melite. Ọ dị ka ịlele ihe ịga nke ọma nke otu ìgwè mgbe ha kụrụ ọkpọ egwu mbụ. Gị na-elekọta mmadụ media nloghachi na ego nwere ike tụrụ naanị mgbe ị n'ezie na-eweta uru ka na-ege ntị, na-ege ntị (na-ege ntị) na-aghọ a obodo (nkekọrịta), na ị na-ewu ma ikike na ntụkwasị obi na gị ụlọ ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-eme egwu dị egwu tupu ị tụọ anya nloghachi! Ọzọkwa, ịlaghachi na mgbasa ozi mmekọrịta na-eto oge - na-ewu oge ka ị na-adọrọ ndị na-ege gị ntị ntị wee wuo obodo nke na-amalite ikwughachi ozi gị. Blog a dị afọ iri ma ọ bụ naanị na afọ 5 gara aga ka ego a na-enweta na-eto ruo n'ókè nke iwulite azụmahịa na ya.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-ezighị ezi # 3: Azụmaahịa Kwesịrị Ibu Ọrụ maka Social Media
Nke a metụtara # 1, mana ụlọ ọrụ na-ejedebe ozi mgbasa ozi mmekọrịta na ngalaba ahịa, ndị na-adịghị njikere ịzaghachi. Ahịa na-adịkarị mma na ịkọ akara na izi ozi - mana ọ bụghị n'ịzaghachi. Ndị Ahịa, Mmekọrịta Ọha na Ndị Ahịa bụ akụrụngwa dị na ụlọ ọrụ gị nke na-atụ anya atụmanya na mgbasa ozi kwa ụbọchị, gee ntị ma zaghachi nchegbu, ma ghọta etu esi emegide nkwenye. Logbasa nnukwu usoro mgbasa ozi ọha na eze ga-enwerịrị ndị ọrụ a mgbe ahịa na-enyere aka ịmepụta ozi, nyochaa na ịkekọrịta na ọwa, ma tụọ mmetụta ahụ.
Ihe omuma ndi mmadu na-ezighi ezi # 4: Social Media Mishaps bu ulo oru di egwu
Ndị ụlọ ọrụ kwenyere na ozi ha na mgbasa ozi mmekọrịta ga-ezu oke, na-enweghị mmejọ. Kwa ụbọchị, izu kwa izu, na ọnwa n'ọnwa anyị na-ahụ ihe atụ ndị a dị ịtụnanya nke otu ụlọ ọrụ si mee ihe ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na-akpọ ọdachi mgbasa ozi ọha na eze. Ha nwere ike ịbụ mmejọ, mana ha anaghị enwekarị ọdachi. Ọ bụrụ na ị na-ele anya niile dị iche iche na-ezighị ezi na mgbasa ozi mgbasa ozi site na ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nwere O D impactGH impact mmetụta na ahịa, ọnụahịa ngwaahịa, ma ọ bụ uru. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike imehie ihe ma weghachite ha kpamkpam. N'ezie, anyị ahụla ebe ikwuputa okwu nzuzu emeela ka ahịa ụlọ ọrụ na-arịwanye elu ebe ọ bụ na ọwa ozi na ebe ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na-ekwughachi okwu a karịa ihe mgbasa ozi ọ bụla nwere ike ịkwụ. Usoro a na-abịa na mkpebi nke mmejọ ahụ na ịgbake nwere ike ịbụ nnukwu uru azụmaahịa ka ọ na-ewulite ntụkwasị obi na izi ezi na ndị na-ege ntị.
Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-ezighị ezi # 5: Social Media bụ n'efu
Chọpụta, ịkọ, bipụta akwụkwọ, ịzaghachi na ịkwalite akara gị na mgbasa ozi mmekọrịta enweghị n'efu. N'ezie, ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ dị egwu, ọ nwere ike ịbụ nnukwu oge na ike maka ụlọ ọrụ gị. Ọ nwere ike ịre gị ahịa kama ịme ya n'ezie. Na n'elu ikpo okwu n'akụkụ, na-elekọta mmadụ media ọwa dị ka Facebook, Twitter, na Pinterest na-kewapụrụ ike site na ha investors ime a Akon… otú ike maka ozi gị na-akwalite na-elekọta mmadụ media enweghị ịzụ ụfọdụ na-ege ntị na-mbenata kwa ụbọchị. Abmepụta mmefu ego na akụrụngwa iji chọpụta, dezie, bipụta ma zaghachi na mgbasa ozi mmekọrịta iji bulie iru gị dị oke mkpa.
Kwere ma ọ bụ kwenye? Olee echiche ndi ozo ndi ozo ikwenyere na ha di?
Tags: mejọrọmmejọ azụmahịaazụmahịa na-elekọta mmadụ media emehiefreemme ukwan̄ ekikereọghọmemehieibu ọrụelekọta mmadụ media blundersusoro mgbasa ozi ọha na eze
Mee 20, 2014 na 9: 32 PM
Ọtụtụ ụlọ ọrụ kwenyere na enwere ike ịme ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi n'otu ụbọchị. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịdị na-enye ozi dị mkpa ma wuo aha ụlọ ọrụ ha iji mepụta mmekọrịta na-adịte aka na ndị ahịa ha iji hụ nsonaazụ kacha mma na mgbasa ozi mgbasa ozi ha.